IBayede izomela awaboHlanga kowezindondo - Bayede News
IBayede izomela awaboHlanga kowezindondo
IThe Nat Nakasa Award for Media Integrity ingumklomelo onikezwa labo baseNingizimu Afrika abasemkhakheni wamaphendaba, amaphephabhuku, ezokusakaza nabaku-online media ababika izindaba ngendlela eqhakambisa ukuzimela nezithunzi sabezindaba. Umlando wokushicilelwa kwamaphephandaba ufakaza ukuthi kuwumqansa ukuqala iphephandaba nokugcina abafundi balo. Lo mlando yiwo eminyakeni emihlanu eyedlule abashicileli be-Ingabadi Media Group, besaphemba, beshicilela phakathi kwamanye amaphephandaba Ibayede ababekhunjuzwa ngawo. Nokho IBAYEDE eneminyaka emihlanu nje vo isunguliwe igile izimanga ngesikhathi iqokelwa kuma-Nat Nakasa Awards aqhutshwa yinhlangano yabahleli baseNingizimu Afrika, iSouth African Editors Forum (SANEF). OZul’azayithole yibo bodwa kumaphephandaba abhalwa ngolwethunga abaqokiwe njengoba abancintisana nabo kungamaphephandaba aziwayo esilungu, okubalwa kuwo iCity Press, iBusiness Day ne-Amabhungane.
Ephawula ngokuqokwa kweBAYEDE, onguMphathi we-Ingabadi Media Group uMnu uNhlanhla Mtaka uthe: “Ukuqokwa koZul’azayithole kuyinto enkulu hhayi kithi kuphela kepha kumaphephandaba aboHlanga jikelele. Lokhu kuqeda imfundisoze ethi amaphephandaba aboHlanga nabhala ngolimi lwesiNguni kumele adume nxa ebhala amahlazo. Kule minyaka emihlanu siphikisene naleyo mfundisoze sethula kwaboHlanga iphephandaba elihlelwe ngesinwe neligxile ekuphenyeni kanzulu,” kusho uMtaka. Okunye okwehlukile ngeBAYEDE nokungesinye sezizathu ituswa kwabezindaba wukuthi ifika lapha nje ayikaze ibe nasikweletu ebhange kepha ibe ngumphumela wezithukuthuku zaboHlanga. Nokho okunye akuvezile uMtaka wubunzima inkampani ehlangabezana nabo nathe kwenye inkathi iyajeziswa ngendlela ehlaziya, nebhala ngayo. “ Akuyona imfihlo ukuthi kunabantu abangayithokozeli indlela esibhala ngayo kanye nesiphenya ngayo udaba. Kule minyaka emihlanu sijeziswe kakhulu yiMinyango kanye noMasipala.
Kuneziwombe lapho ebesiphucwa khona izikhangiso sesiklonyelisiwe ngenxa yokuthi salile ukuthambisa uma sibika ngalowo Mnyango noma uMasipala. Empeleni sijezizwa masonto onke, kusho uMtaka. USihlalo weSANEF uNks uMahlatse Mahlase uthe iBAYEDE yenze okwehlukile ngakho ikufanele ukuba lapho ikhona. “NjengeSANEF siyakwamukela ukuthi kukhona amaphephandaba okungenzeka ukuthi awanakiwe kepha enza umsebenzi oncomekayo ekuqinisekiseni ukubikwa ngokukhululekile nangobuqotho. IBAYEDE yenza okuncomekayo njengephephandaba elinganyanyalati nelibika ngobuqotho.” Umhleli weBAYEDE noseneminyaka engaphezu kwama-20 ekule ndima uMnu uLindani Buthelezi uthe empeleni okuyizinsika zeBAYEDE ngabafundi. “Kukhona konke lokhu okuhamba phambili kithi njengephephandaba ngabafundi abahlale besiqinisa idolo. Yibo abasigqugquzela ukuthi kwesikubhalayo singanyanyalati kepha sibeke amaqiniso njengoba enjalo. Ngakho ukuqokwa kwethu kufakazela ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amaphephandaba aboHlanga angathathwa njengezinkundla zoteku nokujivaza abantu okungasiyisi ndawo njengaboHlanga,” kusho uButhelezi.
Isikhungo sobuntatheli Ebuzwa ukuthi ngabe zithini izinhlelo zephephandaba njengoba selituswa ngontanga kuzwelonke, uButhelezi uthe lesi kuseyisiqalo sokuningi okuzoba yinqabakutholwa kuleli nakwaboHlanga. “Abaphathi be-Ingabadi Media Group banginike umsebenzi omqoka okumele ngiwenze eminyakeni emihlanu.
IBayede izomela awaboHlanga kowezindondo Lowo wumsebenzi wokwakha isikhungo sokuqeqesha izintatheli ezizoba ngongoti ekuphenyeni, investigative journalists, ezizobhala ngezilimi zaboHlanga. Ngisonyakeni wokuqala ohambweni lokufeza leli phupho. Njengoba sesiqokelwe kuNat Nakasa Awards kusho ukuthi sisahamba emgudwini okuyiwo kwazise uNakasa kwabe kuyintatheli enesibindi, ehlaziyayo, enganyanyalati nebhala ngesinwe. IBAYEDE namuhla iyilokho uNakasa ayeyikho nayekulwela,” kusho uMhleli uButhelezi. Uphethe ngokuthi kusuka ngenyanga ezayo bazoqala ukuthungatha izintatheli ezisencane ukuze baqale bazicijele ukuba ngama-investigative journalists.
Dez Khumalo Feb 21, 2020